HORDHACA: Manchester United vs PSG……….(Ma Ogtahay in kulanka Caawa loo isticmaali doono….) – Gool FM
HORDHACA: Manchester United vs PSG……….(Ma Ogtahay in kulanka Caawa loo isticmaali doono….)
Bashiir February 12, 2019
(Europe) 12 Feb 2019. Muddo kaddib waxaa caawa garoomada Yurub laga daari donaa astaanta heesta shixnada iyo mahrajaanka wadata ee Champions League waxaana la daah furi doona kulamada wareega 16-ka ee champions league .
Indhaha Caalamka waxay ku sii jeedaan qalcada Masraxa Riyada oo ay Caawa ku wada kulmi doonaan Manchester United iyo PSG.
United oo gashay xaalad is badal kaddib markii la ceyriyay Mourinho iyo PSG oo aan safkooda ku heysan xidigiheeda ugu muhiimsan ayaa is arki doon.
Maxaa ka cusub labada dhinac :
Safka macalinka kooxda Manchester United ee Solskjaer waxaa kaliya ka maqan oo dhaawac ciyaarta ku seegaya Marcos Rojo, waxeyna taa ka dhigantahay in uu heesto saf xoogan uu ciduu doono uu ka soo xulan karo.
Waxaa la rajeenayaa in safka koowaad ee United ay dib ugu soo laabtan kulanka caawa xidigaha Marcus Rashford iyo Jesse Lingard oo aan garoonka lugta soo saarin kulankii horyaalka ee ay la ciyaareen kooxda Fullham si ay wax yeelo usoo gaarin .
Waxaana meesha ka marneen Victor Lindelof oo waqti xaadirkan ah wadnaha daafaca dhexe ee Manchester United oo isna la siiyey nasiino kulankii Fullham uu dib ugu soo laaban doono safka kowaad balse xidigaha kala ah Chris Smalling iyo Phil Jones ayaa kukala bixi doona dooqa macalinka .
Safka kooxda PSG oo uu hogaamiyo macalin Thomas Tuchel waxaa ka maqnaan doona Saddex xidig oo halbowle u ah kooxda waana xidigaha kala ah Neymar, Cavani iyo Thomas Meunier.
Kylian Mbappe oo la nasiyey kulan ciyareedkii ka tirsanaa horyaalka ayaa dib ugu soo laban doono safka kooxdiisa isaga oo badali doono nambarka 9-aad ee reer Uruguay oo ciyaartan nasiib daro dhaawac ku seegaya .
Marco Verratti oo si wanaagsan ugu soo kabsaday dhaawac canqowga ka soo garay ayaa diyaar u ah in uu wajaho kooxda United .
Kulanka : Manchester United vs PSG (Champions League )
Goorta : 11:00 Habeenimo
Garsoorka : Daniele Orsato(ITA)
FIIRO GAAR AH : Aalada (VAR) ayaa lagu soo kordhiyey tartanka Champions League waxaana loo isticmaali doonaa wareega 16-ka iyo wixii ka dambeeya .
Xaqiiqoyinka kulanka :
Kani wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horreeyay oo tartan Rasmi ah ay isaga horyimaadaan Man United iyo PSG, afar ka mid ah 5-tii kulan ee ugu dambeeyay wareega Bug baxa Champions League ku dhex mara kooxaha Ingiriiska iyo Kuwa Faransiiska waxaa soo baxayay kooxaha reer France.
Ma dhicin Taariikhda in koox France ka socota oo Manchester uga adkaatay garoonkeeda Old Trafford tartamada Yurub ( 4-barbaro iyo 6-guul ) kaliya labo koox ayaa ka badbaaday guul darro iyaga oo soo booqday Old traford wana kooxaha Manoco iyo lille oo bareejo la galay United .
Manchester ayaa guuleysatay hal kulan oo qura Sagaalkii kulan ee ugu dambeyey ee ay ciyaarto kulamada Bug baxa Champions League ( 3-bar baro iyo 5-guul darro ) Marka kaliya ay guul gaareen waxa ay ka badiyeen kooxda Olympiakos bishii Maarso 2014 ciyaar ku dhamaatay (3-0)
United ayaa guuldaro la’aan ah kulamada garoonkeeda Old Trafford tan iyo guul daro 1-0 oo ay kala kulmeen kooxda Juvantus , tan iyo waqtiga United ayaa garoonkeeda ku heshay 7 guul iyo 3 Bareejo marka laga fiiriyana dhammaan xili ciyareedka( 9-guul 6- barbaro iyo 2 –guul darro ).
PSG ayaa adkaatay kaliya hal kulan 10-kii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartamada ay bannaanka kula soo ciyaarto kooxaha Ingiriiska (5-guul darro iyo 4-bar baro), guusha kaliya ayaa waxay ka gaareen Chelsea bishii Maarso 2016 wareega 16-ka Champions League waana markii ugu dambeysay ay ka soo gudbaan wareega 16-ka.
PSG ayaa soo gaartay wareega bug baxa ee Champions League 7-sano oo xiriir ah waana waqtiga ugu dheer marka laga soo tago Real Madrid (22-jeer) Barcelona (15-jeer) iyo Bayern Munich 11-jeer, yeelkeede PSG marna ma aysan gudbin wareega Sideed dhammaadka tartanka iyadoona ku soo hareysay wareega 16-ka labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay.
Safafka Macquulka ah ee Manchester United vs PSG:
Gool F M.
“Neymar Jr wuxuu ka sareeyaa qof walba”